Hira maneho ny feon’ny vahoaka voarara any Nizeria sy Ogandà · Global Voices teny Malagasy
Manohitra ny governemanta sy ny fampijaliana ireo hira ireo
Voadika ny 22 Marsa 2022 4:27 GMT
“Fanomezam-boninahitra ny andro nahaterahan'i Fela Kuti” Sary avy amin'i Lucy Anne, 15 Oktobra 2010 (CC BY-ND 2.0).
6o taona mahery kely lasa izay, nahazo fahaleovan-tena tamin'ny mpanjanaka ny firenena afrikana. Noheverina fa hitondra fahatsapana vaovao momba ny nasionalisma, ny soa iombonana ary ny mari-panondroana azy ny rivotry ny fiovana. Maro amin'ireo lehiben'ny fanjakana sy ny governemanta anefa no saika nanitsakitsaka ny fampanantenany hampiroborobo endrika fitantanana hafa.
Tafiditra hatrany amin'ny tolona fanafahana sy fahalalahana ho an'i Afrika ny mozika. Tany Afrika Atsimo, niatrika sivana lehibe ny mozika manohitra ny fanavakavaham-bolonkoditra. Toy izany koa, tany Nizeria, nijoro ho firaisankina tamin'ny Afrikana Tatsimo ireo mpitendry mozika, niantso ny famotsorana an'i Nelson Mandela na nitaraina tamin’ny herisetran'ny polisy, naneho ny feon'ny hetsi-panoherana. Nahatsapa ireo mpitendry mozika afrikana ireo fa tsy afaka nanohy nandihy izy ireo raha tsy mendrika hankalazaina ny zava-drehetra manodidina azy.
Nahatsapa ho manana andraikitra hampiasa ny feony izy ireo hiresahana ireo fotoana niainany. Ao anatin’izany, firenena maro no naneho ny feony niaraka tamin'ireo tarika sy mpitendry mozika malaza, na dia neken'ny manampahefana tamin'ny voalohany aza, dia niafara tamin'ny fanasaziana sy/na fandrarana tanteraka azy ireo.
Ao anatin'ity andiany roa ity, hiditra amin'ny tantaran'ireo mpitendry mozika isan-karazany manerana ny kaontinanta isika izay heverina fa miresaka politika loatra ny mozikany ary hamantatra ny antony noheverin'ny governemantany ny mozikan’izy ireo ho ‘mampidi-doza’.
Fanehoana ara-javakanto mampiseho an'i Fẹlá Aníkúlápò Kútì. Sary avy amin'i Danny PiG nalaina tao amin'ny Flickr ny 11 Septambra 2012. (CC BY-SA 2.0)
Nandritra ny androm-piainany, nanatri-maso sazy , raharaham-pitsarana, herisetran'ny polisy, ary fandrarana tamin'ny onjam-peo maro be amin'ny mozikany revolisionera ilay Afrobeat malaza efa nodimandry, Fẹlá Aníkúlápò Kútì. Na dia teo aza ny faneren'ny fanjakana, tsy nitsahatra namoaka ireo hira izay miresaka ny Nizeriana sy Afrikana maro manerana izao tontolo izao izy.
Tamin'izany fotoana izany, andron'ny nanjakazakan'ny miaramilan'i Nizeria, voarara ho an’ny onjam-peo rehetra ny mandefa ny hiran'i Kútì ary noheverina ho fahavalom-panjakana izay olom-pirenena rehetra hita nifanerasera tamin'ilay mpitendry mozika revolisionera na mivantana na tamin'ny alalan'ny hirany. Indray andro, notafihin'ny miaramila an’arivony, izay nanao asa ratsy isan-karazany toy ny fanolanana, halatra ary daroka olona ny fonenan'i Fẹlá, tany Lagos, renivohitra ara-toekarena any Nizeria, fantatra amin'ny anarana hoe Repoblika Kalakuta. Nandritra ny fanafihana, natsipy avy eny amin’ny tranobe avo iray ny reniny efa antitra, ka nitarika ny fahatapahan’ny tongony ary niafara tamin’ny fahafatesany izany. Taorian'io fanafihana ara-miaramila tao an-tranony io, namoaka ny “Zombie” sy “Unknown Soldier” i Fẹlá tamin'ny taona 1981, samy natokana ho an'ireo miaramila nanafika ny tranony ireo hira roa ireo.
Tamin'ny taona 2004, noraràn'ny filoha Nizeriana teo aloha Olúṣẹ́gun Ọbasanjọ́ ilay hira malaza miresaka ny firenena tratran'ny fahantrana mitondra ny lohateny hoe “Jàgà-jágá.” Jàgà-jágá, hira iray niparitaka na dia tany ivelan'i Nizeria aza, nihira am-pahatezerana i Eedris Abdulkareem, nitomany amin'ny fiaretan'ny Nizeriana sy ny aretim-piarahamonina izay niafara tamin'ny fomba fiavotan-tena ho velona manoloana ny fahantrana lalina. Nitarika ny fandrarana ilay hira tamin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra ilay rakikira niteraka resabe, ary nahazoany fanasana ho any amin'ny trano fonenan'ny filoha (Aso Rock) ao amin'ny Renivohitra Federaly izay nampitandreman'ny filoha azy mba tsy hamoaka hira maneso ny firenena sy hametraka izany amin'ny songadina ratsy amin'ny tontolo ivelany. Mbola niziriziry ihany ity mpanakanto ity ary namoaka ny fangatahan’ny filoha tamin’ny hira hafa mitondra ny lohateny hoe “”Letter to Mr. President” nivoaka ny taona nanaraka.
Bobi Wine avy amin'ny Mbowasport, nampiasana lisansa CC BY-SA 4.0
Tamin'ny taona 2017, namoaka hira iray mitondra ny lohateny hoe “Freedom” i Robert Kyagulanyi Ssentamu fantatra amin'ny anarana hoe Bobi Wine fony izy mpikambana tao amin'ny Parlemanta tao Ogandà. Nampiasa ny sehatra tamin'ny maha-mpitarika eo an-toerana azy sy ny fitaomana azony natao teo amin'ireo tanora an-tanàndehibe ao amin'ny firenena izy, nikatsaka ny hamaha ny olan'ny firenena amin'ny mpitondra mitondra ela loatra ny hiran'i Bobi. Notanisainy ny Adin'i Bush tany Oganda tamin'ny taona 1980 izay nahitana ny filoha ankehitriny Yoweri Museveni nanongana an'i Milton Obote. Nanotany izy hoe nahoana i Museveni no nmpihatra (indray) izay efa niadiany — nampitaha ny fitondrana ankehitriny amin'ny fanandevozana sy ny fihenjanana tamin'ny rafitra fanavakavaham-bolonkoditra ao Afrika Atsimo.
Nampanalasala an'i Bobi ihany koa ny tanjon'ny lalàmpanorenana Ogandey izay antsoiny hoe fanantenana farany ho an'ny firenena. Notanisainy ny tsy fisian'ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'ny firenena, mandrisika ny Ogandey hiteny hanohitra ny tsy rariny miaraka amin'ny fahalalahana ho an'ny rehetra — tsy ijerena taona, sarangam-piarahamonina, fivavahana, na fanabeazana misy azy ireo.
Miresaka momba ny herisetran'ny polisy amin'ireo olona monina ao amin'ny tanàna mahantra ao Kampala sy ny tsy fahampian'ny fanampiana omena azy ireo ny iray amin'ireo hirany malaza kokoa, “Ghetto”. Tamin'ny volana Aprily 2019, nambenana tao an-tranony i Bobi Wine, ary nandritra izany fotoana izany no namoronany hira iray hafa amin'ny fiteny maro momba ny herisetran'ny polisy mitondra ny lohateny hoe “Afande”, teny swahili ilazana ny manamboninahitra.
HAMAKY BEBE KOKOA: Nanoratra hira momba ny herisetran'ny polisy ilay mpanao politika sady mpanakanto Ongadey nandritra ny fanagadrana azy tamin'ny trano ambenana
Nanomboka tamin'ny taona 2018, voarara tsy azo nanaovana fampisehoana, na nalefa an-kalamanjana mihitsy aza ny sasany tamin'ireo hirany, satria nihevitra ny mpiasam-panjakana fa mampiasa ny mozikany amin'ny tanjona ara-politika sy (hanandrata-tena) izy. Fotoana fohy taorian’izay, nambarany ny fahalianany amin'ny firotsahana ho filohan'ny firenena tamin'ny fifidianana izay natao tamin'ny fiandohan'ny taona 2021.
Nanatevin-daharana azy tamin'ny fifidianana ny mpitendry mozika malaza iray hafa antsoina hoe Joseph Mayanja, fantatra ihany koa hoe Jose Chameleone. Nahatonga ny fanafoanana ny fampisehoana nataony ny fidirany tamin'ny politika rehefa nanambara ny firotsahany ho ben'ny tanàna tao Kampala izy. Tamin'ny taona 2016, nivadika ho mpanao politika ilay mpanakanto ary nandratra mpanao gazety sy DJ ka nahatonga ny mozikany ho voarara tao amin’ny Trace TV, fantsom-pahitalavitra mandefa mozika any Frantsa izay mandefa mozika manerana an'izao tontolo izao.
Tadiavo eto ny lisitry ny Spotify Global Voice izay manasongadina ireo sy ireo hira voarara manerana izao tontolo izao. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny mozika voarara, jereo ny fandrakofanay manokana, Striking the Wrong Notes.